Lokuseka Ishishini kwi-Russia - Qala-phezulu kwi-Russia, Isemthethweni Iifomu ka-Incorporation - Russian abaqondisi-mthetho
Lokuseka Ishishini kwi-Russia — Qala-phezulu kwi-Russia, Isemthethweni Iifomu ka-Incorporation — Russian abaqondisi-mthetho
Ukukhetha apho uhlobo isemthethweni iqumrhu ukubhalisa sesinye ibaluleke kakhulu stages phambi ukuzibophelela ishishini umsebenzi kwi-Us. Uhlobo isemthethweni ubuso uza impembelelo zonke umsebenzi, kuquka-mali kwaye irhafu lokwenza ingxelo, masiko kwaye okwangoku ulawulo. Ngoko ke, i-investor kufuneka ahlawule eyodwa efuna ingqalelo ukumisela ngendlela eyiyo corporate ifomu leyo iza uncedo kuye kuphunyezwe iinjongo zakhe xa intlanganiso zonke iimfuno zomthetho. Imigaqo nokumisa inkampani kwi-Russia ingaba iselwa kakuhle-kwaphuhliswa kwaye ingaba limiselwe ngumthetho i-RF Zasekuhlaleni Ikhowudi kwaye yi-ezongezelelweyo RF imithetho. Edibeneyo stock kwaye limited eyimali iinkampani ingaba ifomu asele kakhulu asetyenziswa rhoqo yi-langaphandle abatyali-mali ukuba ufake i-Russian wentengiso kwaye ingaba wahlaziya ngezantsi. I-limited eyimali inkampani (hereinafter LLC) lunxulumano njengoko inkampani esekwe omnye okanye ngaphezulu abantu, ngubani wagunyazisa eyinkunzi ngu umahlule kwi inxaxheba umdla, ubungakanani nto stipulated yi-founding amaxwebhu. Abathathi-nxaxheba ye-LLC musa ubungqina eyimali yi-izibophelelo zayo kodwa ubungqina umngcipheko ilahleko idibene ne-companys umsebenzi ngaphakathi iindleko imirhumo abayenzileyo. I-LLC kusenokuba waseka yi-noba umntu okanye iqela labantu, okanye i-Russian okanye kumazwe angaphandle inkampani. Inani labantu abathatha inxaxheba kwi-i-LLC ayikwazi zingaphezu. Ukuba inani exceeds, ngoko ke LLC ngu ngokulawulwa reorganization kwi-i-Vula JSC kwisithuba sonyaka. Kwi kuphele le elithi, ukuba inani labantu abathatha inxaxheba alifumanisanga sele ukuphumela, kuya kuba liquidated phantsi inkundla isigqibo. I Company ayikwazi kuba sole nxaxheba ngomnye ishishini association iqulethe elinye iqumrhu (oyedwa okanye isemthethweni iqumrhu). Ubuncinane wagunyazisa eyinkunzi akavumelekanga ukuba abe ngaphantsi RUR, (malunga nama-dollazi) kwaye ubuncinane amahlanu ipesenti ye imali kufuneka ahlawulwe phambi companys ubhaliso. Imirhumo inokwenziwa imali ezinkozo okanye kwi-zalo lonke udidi. Jikelele-nxaxheba intlanganiso ephezulu elawula umzimba lonto yenza zonke kwalomgaqo-siseko izigqibo kuba ukulawula kunye nokugcina i-companys kwezoqoqosho umsebenzi. Ukuba zabelo intends kuyo yayo share nesabelo isabelo eyinkunzi, zabelo iya kuba ukufumana lo umthetho ekusetyenzwe nge notary, ihamba kunye emva ubhaliso kunye irhafu abasemagunyeni. Ibhodi Abalawuli, apho supervises jikelele companys umsebenzi.
Ukumiselwa kwebandla Ibhodi Abalawuli ngu amahlakani kungokuzithandela intetho ka-uza ngendlela enye ulawulo phezu inkampani. Oluphezulu umzimba (idla jikelele umlawuli okanye ukulawula company). Injongo ephambili umsebenzi esinolawulo oluphezulu umzimba ngemihla yolawulo inkampani. Ukongezelela ekubeni unoxanduva ukuba companys shareholders, sole oluphezulu umzimba sele, ulwaphulo-mthetho kwaye administrative uxanduva phambi kokuba urhulumente. Ngqo ulawulo lwe-Russian inkampani ngu concentrated kunye omnye umntu — mlawuli jikelele. Kubalulekile akukho ngaphantsi kubalulekile ukuba kukho ithemba umntu wonyulwa ukuba i-jikelele umlawuli kwaye edibeneyo stock inkampani (JSC) inkampani, ngubani wagunyazisa eyinkunzi ngu umahlule kwi uqiniseko inani izahlulo abanini bezinto JSC (amahlakani) musa ubungqina eyimali kuba yayo izibophelelo, kodwa ingaba ukwamkela imingcipheko obandakanyekayo kunye ilahleko zidityanisiwe JSCs umsebenzi ngaphakathi ixabiso zabo izahlulo. Ubhaliso kwi kwelayisenisi izahlulo waza kamva filing iphantsi Federal-Mali Kwiimarike Inkonzo linegunya. Kukho iindidi ezimbini JSCs: Ukuthengisa izahlulo eyenzeka ngaphandle phambi ukuvunywa shareholders, kuquka kwi-securities yentengiso, kunye ngaphakathi kwaye ngaphandle territory ye-isirashiya.
Limited inani shareholders, apho ayikwazi zingaphezu
Kungenjalo, inkampani ngu ngokulawulwa reorganization kwi-Vula Edibeneyo Stock Inkampani ungaphelanga unyaka annd ulawulo isakhiwo se-a JSC lufana ulawulo isicwangciso i-LLC. Zombini vula kwaye ezivaliweyo JSCs ingaba obliged ukuba ingaba u-elawula imizimba: Jikelele Shareholders Kwintlanganiso esinolawulo Oluphezulu Umzimba. I-OJSC kunye phezu amahlanu shareholders kufuneka ube Ibhodi Abalawuli okanye Supervisory Ibhunga. Kwi-umahluko solawulo Kwibhodi Abalawuli kwi-i-LLC, inani imiba enxulumene jikelele shareholders intlanganiso unako sithunyelwe igunya ibhodi abalawuli bakhe a JSC. Ngaphaya koko, JSC kufuneka ngonyaka kuphengululwa ngokusesikweni elinolwazi ngaphandle zincwadi kuba ulawulo kwaye imvume yayo yonyaka-mali iingxelo. Isebe kwaye ummeli ofisi langaphandle amaqumrhu asemthethweni asingawo mbasa ukuba abe Russian amaqumrhu asemthethweni, kodwa imizimba nto — izinto ezichaphazela langaphandle isemthethweni yequmrhu kunye headquarters kwelinye ilizwe. Itafile ngezantsi inika uthelekiso ezimbini ifomu: A ummeli-ofisi yi subdivision ka-langaphandle isemthethweni iqumrhu oko amele companys (headquarters) umdla kwi-Russia kwaye ayikwazi aza kuthatha inxaxheba abarhwebayo umsebenzi. Eyona injongo ukuseka ummeli-ofisi ngu lentengiso uphando kuba Russian yentengiso ne-promotion of abarhwebayo ubudlelwane phakathi phakathi kwentloko inkampani kwaye Russian iinkampani. Igama elithi kuba apho ummeli-ofisi lingamiselwa phezulu lixabiso elikhulu leminyaka emithathu, kunye ilungelo ulwandiso. Igama elithi kuba apho ummeli-ofisi lingamiselwa phezulu ngu phezulu ukuya kwiminyaka emihlanu, kunye ilungelo ulwandiso. Urhulumente imali kuxhomekeke igunya phantsi ulawulo isakhiwo se-a ummeli okanye isebe i-ofisi ngu bemelwe esinolawulo oluphezulu umzimba kwi-umntu intloko besebe okanye ummeli-ofisi. Kwentloko subdivision ka-langaphandle isemthethweni iqumrhu izenzo kwi isiseko Amandla Lamagqwetha esikhutshwe ngokusemthethweni kumazwe angaphandle kweli qumrhu. I-langaphandle inkampani ngokwayo limisela Kweentloko umda we igunya. I-langaphandle inkampani sinakho nangaliphi na ixesha revoke amandla lamagqwetha kwaye idluliselwe kwelinye iqumrhu. Kanye ifomu a isemthethweni ubuso ngu esikhethiweyo, inkqubo kuba urhulumente ubhaliso kufuneka kuqaliswe. Ngokungqinelana nomgaqo-Federal Umthetho»Kwi-Imo Ubhaliso Amaqumrhu Asemthethweni»ubhaliso ingaba yenziwa yi-irhafu amagunya abo ifayile amaxwebhu kunye Idityanisiwe Urhulumente Bhalisa zingaphelanga iintsuku ezintlanu (irhafu igunya kwi-Moscow — iintsuku ezisixhenxe). Xa ufuna bhalisa isithuthi Russian isemthethweni qumrhu, omnye amahlakani kufuneka ufake uxwebhu kwi umntu. Umntu wagunyazisa ukuba umqondiso isicelo ufake uxwebhu kubhekiswa kuwo njenge-Sicelo. Ukuba ngu-zabelo inkampani, ngoko ke, umlawuli we-inkampani kwi umbuzo izenzo njengoko-Sicelo. Ukuba umfaki-sicelo ayikho nako ukuya kwintlanganiso yoluntu igunya sokubhalisa, amaxwebhu zibe ithunyelwe nge-imeyili. Kule meko, ebhalisiweyo amaxwebhu iya kuthunyelwa khona idilesi neenkqubo zomthetho iqumrhu ngenxa yokuba wadala. Emva koko, alandelayo nemigaqo-nkqubo mayigqitywe: — Yokufumana ubhaliso iziqinisekiso ezingeyo-budgetary imali (Pension Fund, Obligatory i-Inshorensi Yezempilo Ingxowa-mali kwaye Yokhuseleko Lwezentlalo-Mali) — kwimeko ukuseka JSC, securities mba kufuneka ebhalisiweyo kunye Federal Inkonzo ye-Mali Yentengiso ye-isirashiya. I-deadline kuba ubhaliso i-Russian isemthethweni iqumrhu kuxhomekeke yayo isemthethweni yolungiselelo ifomu. Kuba i-LLC — kwiiveki, kuba JSC — kwiiveki inyanga enye kuba nokubhalisa lo mba izahlulo. A imali ka- rubles ngu isetyenziswe xa nokubhalisa Russian amaqumrhu asemthethweni. Intlawulo kuba nokubhalisa izahlulo kuxhomekeke uhlobo izahlulo. Amasebe kwaye ummeli ofisi kufuneka kanjalo kubekho ogunyazisiweyo ne-state imizimba wagunyazisa ukuba isibonelelo eso accreditation. Ngesiqhelo, la mandla kuquka Urhulumente Ubhaliso Kwegumbi e Kubulungiseleli Lobulungisa ye-isirashiya, Kwegumbi of Commerce noshishino kunye ezahlukeneyo Ministries ka-Us. Umzekelo, ukuba inkampani ngu owenza zemfundo umsebenzi, ummeli okanye isebe i-ofisi zibe ogunyazisiweyo kunye Nesebe wemfundo. Ukuseka i company, langaphandle investor sele ukulungisa elizeleyo uluhlu lwamaxwebhu afunekayo yi Russian umthetho. Onke amaxwebhu ukusuka ekhaya ilizwe langaphandle isemthethweni iqumrhu kufuneka notarized kwaye apostilled kwaye notarized uguqulelo kwi-Russian kufuneka imiselwe. I-deadline kuba nokubhalisa a ummeli-ofisi isebe langaphandle iqumrhu kuthatha omnye zimbini zidlulileyo, kuxhomekeke ukusetyenziswa expedited accreditation nemigaqo-nkqubo nge-mandla eliphathiswe kwelayisenisi amaphepha-mvume kuba ivula ummeli ofisi amasebe. Mayela i-abovementioned ubhaliso xesha, ubhaliso a JSC uza kuthatha enye inyanga kunye FFMS. I-deadline kuba nokubhalisa a ummeli-ofisi isebe langaphandle iqumrhu kuthatha omnye zimbini zidlulileyo, kuxhomekeke ukusetyenziswa expedited accreditation nemigaqo-nkqubo nge-mandla eliphathiswe kwelayisenisi amaphepha-mvume kuba ivula ummeli ofisi amasebe. Disclaimer: Xa wonke umzamo omkhulu wenziwe made ukuqinisekisa kuchaneka le upapasho, ayinjalo intended ukubonelela isemthethweni ingcebiso njengoko umntu kwiimeko uza differ kwaye kufuneka uxoxwa angeliso ingcali kwaye okanye lawyer
Njani Ukwenza Ibango